SYF-1 စီးရီး Centre-dive Gear Box - အနုတ်၊ တီကောင်လျှော့၊ တီကောင်ဂီယာအုံများ၊ ဂြိုလ်ဂီယာအုံများ၊ အမြန်လျှော့ချစက်၊ မူကွဲ၊ helical ဂီယာ၊ ပန်ကလီယပ်စ်ဂီယာ၊ စိုက်ပျိုးရေးဂီယာအုံ၊ ထွန်စက်ဂီယာ၊ ထရပ်ကားဂီယာ၊
SYF-1 စီးရီးစင်တာ -dive Gear Box
ပင်မစာမျက်နှာ / Speed ​​Reducer & Gearbox / SYF-1 စီးရီးစင်တာ -dive Gear Box
(input speed သည် ၁၇၄၀ rpm ဖြစ်လျှင်)
ဤ worm ဂီယာသေတ္တာအမျိုးအစားသည်ဗဟိုမဏ္irrိုင်ဆည်မြောင်းစနစ်၏မောင်းနှင်မှုလမ်းကြောင်း (မောင်းနှင်မှုရထား) နှင့်မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပဒေသနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိရွေ့လျားသည့်ဆည်မြောင်းစနစ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအမှုန်များကိုအသုံးပြုပြီးအဓိကဂီယာအစိတ်အပိုင်းများကိုမြင့်မားသောသတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်ကာကွယ်သည့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်း၊
1. torque စွမ်းရည်: 4,500 lb.in (510 Nm) ။
3. NEMA 56-C မျက်နှာပြင်မော်တာကို ၀.၆၂ လက်မ၊ ၀.၁၉ လက်မရှိပြီး ၀.၁၉ လက်မမျက်နှာပြင်ဖြင့်လက်ခံသည်။
4. Multiple mount bolt ပုံစံများ5"× 6", 3.38 "× 6.38" အားလုံးမဏ္fitိုင် fit ။
၆။ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ထားသော shock absornt motor ကို worm gear box coupler တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
၇။ output shafts နှစ်ခုစလုံးတွင် 7/1” × 4-1 / 1” သော့များရှိသည်။
၉။ သီးခြားသီးနှံကာကွယ်ရေးတံဆိပ်များပါ ၀ င်သည်။
11. အလေးချိန်: 15.9 ပေါင် (7.2Kg)
12. ရေနံစွမ်းရည် - 0.21 gal (0.8 L)
တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အတိုင်းအတာ (အရွယ်အစားသည်လက်မရှိသည်):